Hapana kutamba kwemwana - iyi ndiyo nzira yaunowana muchecheti wakarurama
Tsvaga pamusoro penzira yekugovera nzvimbo
Shandisa mukana wekudzidzira uye kuvimba mumuviri wako kunzwa
Montessori, chechipiri kana kuti pane yakanyanyobatanidza chikoro chekunamata? Kusarudza chikoro chekodzero chakanaka hazvisi nyore kune vabereki vakawanda. Izvi zvinokonzerwa nechikonzero chokuti zvakaoma kuwana zvakanaka kune wako pachako nekuda kwehuwandu hwemashoko edzidzo. Kune rumwe rutivi, kune kodzero yekusununguka kusarudzwa kwerekitari muGermany, asi izvozvo hazvirevi kuti nzvimbo mune zvakarongedzwa zvinoda kusununguka.
Haisi kutamba kwemwana - iyi ndiyo nzira yaunowana muchecheti wakarurama
Kunze kweizvozvo, saamai kana baba, iwe unofanira kuziva nzira iyo iwe unogona kuziva kukoshesa kwechirongwa chekuchengeta zuva.
Tangotanga kutanga kutsvaga goroji yakakodzera
Kusarudzwa kwekwenyoro yakanaka
Kana mwana wako achizoenda kuchikoro chechikoro kubva pazera remakore matatu, kunyorwa kunowanzoitika pakati paJanuary naMarch. Kusvikira April, kugamuchirwa kana kuregeswa kunotumirwa. Kune zvivako zvemunhu oga kana chechi, zviitiko zvinogona kunge zvakasiyana zvishoma kubva kune avo vari mumasitereji emaspala.
Waizorega mwana wako asati wechitatu wokuzvarwa kutarisirwa pazuva vachembera, nekuti uchida kupinda basa nokukurumidza sezvinobvira, iwe unofanira kutanga kutsvaka wako, asi kanenge 12 kuna 15 mwedzi vasati vatanga basa mangwanani.
Asati vakupe achishingaira kutsvaka kukireshi, unofanira kufunga here zviri kunyanya kukosha achitarisirwa mwana wenyu. Zvinonzwisisika kuongororawo unhu hwemwana wako. vana vainyara uye yakachengeterwa avo saka kure akaita shoma ruzivo zvakanaka mwana vari zvitarisirwe zvakanaka mune diki Namano yakatarwa boka nhengo.
Unhu hwemwana wako hunogona kuva hunokosha pakusarudza gorosi rakanaka
Kana mwana wako akaratidza kuongorora kukuru, somuenzaniso, chikoro cheine chirevo chakazaruka chinova mubvunzo. Mukuwedzera, semubereki, iwe unofanira kufungisisa kuti chii chinonyanya kukoshesa kudzidzisa iwe. Chiremba chega chega chemazuva ano chinoshanda maererano nedzimwe pfungwa. Kazhinji, pfungwa yacho inogona kuonekwa pawebsite yeiyo yega yega kana inowanikwa nevabereki vanofarira kuchengeta.
Vazhinji vekugadzirira vana vanofunga nezvekusimudzira basa rekunyama kana kudzidzisa mimhanzi. Kuti vari akati, pane mitauro miviri kindergartens kana avo vanotevera imwe nzira yedzidzo akadai Montessori kana Waldorf Education. Dzidzo yechitendero uye kupindirana kwakabatana kwetsika dzechiKristu uye tsika dzakakosha zvikuru kune masangano emasangano.
Kwete kwete nyika yose, asi guta rimwe nerimwe rinogona kuzvisarudzira kuti gereji nzvimbo dzichapihwa. Kumasuo emunharaunda, iwe unogona kazhinji kuratidza chikoro chako chaunoda mu fomu yekunyora. Kunyanya kunowanzopiwa vana vevabereki vasina voga. Zvisinei, zvichienderana nehukuru hweboka revanhu, zviri kune zviremera zvekutarisira kukupa imwe nzvimbo mune imwe gergarten pedyo neunogara. Hapana hurumende yekutarisira vana mune imwe nzvimbo. Zvose zvinoda kuitika ndeyekuti vese vana vaongororwe kana vachiisa nzvimbo.
Kunyangwe pfungwa yakanakisisa yekudzidzisa ndeyekuti haisi kukosha kana munhu ane unyanzvi asingakwanisi kuzviita mumabasa ezuva nezuva.
Tora mukana wose kuti iwe pachako uone zvivako zviri mubvunzo. Nyora nyanzvi mberi kwezvinhu zvaunonyanya kufarira uye kubvunzisisa kwaunogara. Nezivo izvi, unokwanisa kuenzanisa nzvimbo imwe neimwe gare gare uye kuita sarudzo yakanakisisa yemwana wako.
Saka tora vana venyu hazvo, kana iwe tarisa wacho zvivako: Uchaona pakarepo kana mwanasikana wako kana mwanakomana wake anonzwa kugadzikana uye welcome vari kukireshi kana kwete. Izvozvo zvekupedzisira zvinofanira kugara zvichinyanya kukoshesa mukusarudza yegorokeji.
Chikoro chakanaka chinogona kuzivikanwa nekuti kune hukama hwakanaka huripo uye kuti vana nevabereki vanobatwa nekuonga. Kukurukurirana pakati pevashandi vekudzidzisa kunofanirawo kuwirirana. Basa rakanaka rekudzidzisa muchekechera nguva dzose rinotarisana nehuwandu hwekushandira pamwe mukati memutambo.
Izvo zvichiti, kuve pachena kune zvakakosha. Nzvimbo iyo mwana wako anotarisirwa nayo inopinda muchibvumirano chekudzidzisa newe. Izvi zvinoreva kuti, semubereki, unoshanda nechekeji kuitira kuti unofambidzane nekusimbisa kukura kwevana vako. Naizvozvo bvunzurudza pamusoro pezviitiko, kuti vabereki vanogona sei kugovera muchikoro chechikoro chezuva rehupenyu hwezuva nezuva uye teerera nekushanya kwako pane zvizivo uye zvinyorwa zvese.
Pakupedzisira asi kwete, zvigadzirwa zvegerereji hazvikoshi. Hazvirevi nguva dzose kuti zvive zvishandiso zvemazuva ano, asi nzvimbo yakachengetedzwa zvakanaka uye inoshanda yakakosha sezvinonzi pedagogically inobatsira matoyi. Mukuwedzera pakuvaka. Kuveza nekugadzira zvinhu zvinofanira kunge zviripo mitambo yebhodhi, pamwe chete nemabhuku, mabhuku ezvifananidzo uye zvigadzirwa zvemutambo yemitambo yemitambo.
Sezvo vana vatatu vane makore vane zvidikanwi zvakasiyana pane vana vasati vadzidza, nguva yakakodzera-kutamba uye yekudzidza zvinopiwa hazvifanirwe kushayikwa, izvo zvaunofanira kuratidzirwa. Uyezve, ona kuti basa rekuchikoro rinoratidzika sei pane imwe nheyo. Kukurudzira mari munharaunda yekufungisisa, mutauro uye kunyora kunyoresa, kuzvirongedza uye mumunda wekugutsikana kwepfungwa kunokosha.
Munharaunda yakanaka, mibvunzo yako yese inofanira kupindurwa nekushivirira uye zvakadzama. Kana izvi handizvo, mungadai nani kuramba akatarira: A akanaka hanya mwana anogona chete kushanda kana mapato vanoita zvinodiwa mwana uye unogona kuvaka nechivimbo nesangano dzakadai kukireshi sezvo vabereki.
Ndinowana sei bra yakarurama? Woman fashion
Zvikanganiso zvevana - tsvaka kusiyana
Runako - iye ari muziso remuoni here?
Grill zvinonhuwira - Painochera zvinonhuwira zvakanaka
Misoro inobatsira mhuri yezororo
Ndiine motokari nemhuri pazororo